FAKAFAKA: Ny teny, teny ho eny, zary tenindreny ! | NewsMada
Ho an’ny mpikirakira sy mpahay ary mpikaroka momba ny teny, toa tsy maninona loatra raha ireo teny, teny ho eny no lasa tenindreny. Miaina sy mivelona, hono, ny teny iray raha miseho io tranga io. Ho an’ny mpandala ny teny malagasy indray, ireo teny malagasy tsy nampiasaina loatra no tokony hofohazina fa anisan’ny mampahantra ny tontolon’ny voambolana ny « teny matory ». Fomba fijery roa, toa mifanohitra, nefa toa mifameno ihany.
Ilay voalohany, faheno isan’andro. Mipoipoitra etsy sy eroa ireo karazana voambolana samihafa. Ny faharoa kosa, mahalana dia mahalana vao maheno voambolana nofohazina ny Malagasy. Mazana aza, zary lasa teny vaovao eo anivon’ny fiarahamonina izy ireny. Tsy ampy ny famohazana ireo teny malagasy matory.
Na eo aza ireo rehetra ireo, ahitana lesoka be ny fanabeazana eto Madagasikara. Tsy ny fanabeazana any an-tsekoly ihany fa rehefa mety ho sehatry ny fanabeazana, kitoatoa ny ankamaroany. Raha mbola dondrona tsy mahay teny malagasy sady menatra ny mampiasa ny tenindrazany tahaka izao ny ray aman-dreny sy ireo heverina ho raiamandreny sasany, na hankalaza ny « Andro iraisam-pirenena ho an’ny tenindreny » ao anatin’ny anarivorivon-taona aza ny Malagasy, zary sarin’ady avokoa izany.
Ny mifanohitra amin’izay, raha manana fahavononana ny hiteny amin’ny fiteny malagasy avokoa ny Malagasy rehetra, na iza izy na iza, tsy ilain’i Madagasikara akory ny mankalaza io andro iraisam-pirenena io. Tsy midika akory izany fa tsy hianatra teny vahiny ny zaza malagasy. Paikady napetraky ny « mpibaiko » any amin’ireo tany nozanahiny ny fifangaroan’ny« teny hoenti-mampianatra » sy ny « teny ianarana ».
… Sao mba mila famatsiam-bola sy teknisianina avy any ivelany aza ny fandresen-dahatra ny Malagasy, hiteny malagasy ?